ဆိုးသွမ်း: ကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့သော( ၁၂ )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:23 PM
ကိုဆိုးသွမ်းရေ..... သရဲဆိုလို့ ကျွန်တော် မန္တလေးက ကြာနီကန်ရွာမှာ စခန်းသွင်းတုန်းက ကြာနီကန်သင်္ချိုင်းမှာ
စမ်းဘူးတယ်ဗျ။ နောင်များအဆင်ပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေကိုိုပြောပြမယ်ဗျာ.....ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျ......
Ghost, Monster whatever it is.., Haha I am not afraid indeed. Bring it on!!!
You created this posts to appear pictures in eyes as I felt like watching good movie. Of course, you are an ACTOR in this movie. hehe..,
Cant wait to have part 13, Bo Cat!! :)
ဗိုလ်ကြောင်ရေ.....နောက်အပိုင်းမှာ ကွတ်ခိုင်သူ ရှမ်းမလေးတွေ ချောတာရေးအုံးဟ....ရှိုမထားနဲ့
မောင်လေးရေ လာဖတ်သွားတယ်ဟေ့၊ သရဲမက ကြမ်းတယ်တဲ့လား၊ မကြောက်ပါနဲ့၊ ပြုံးပြလိုက်ပါ သူအရင်ထွက်ပြေးစေရမယ် စိတ်ချ၊ ဟဲဟဲ စတာနော်
ဟဲ..ဟဲ... :P :P
""နေကို အရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ နေရာ (၀ါ) နေနဲ့အနီးဆုံး ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်တွေမှာ နေကြပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီလို နေခြင်းဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ ပိုပြီး နီးစပ်ဖို့ ဖြစ်နိင်တယ်ဆို"""
ှဆွန်ဇု ရဲ့ နညးဗျူဟာမှာတော့ တောင်ရဲ့ အရှေ့ ဘက် (သို့) နေရောင် များများ ရတဲ့ ဘက်မှာ နေတာက ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု နည်းပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပို ညီညွတ်တယ် လို့ ရေးထားတယ် ဗျ :)
ဗိုလ်ကြောင် ဗိုလ်ကြောင် အခုလဲ သင်္ကြန်ကိုလွမ်းနေပြန်
ဆိုးသွမ်းရေ လာဖတ်လိုက်တာ အစ်မတောင် ကြောက်သွားတယ်... တစ်ယောက်ထဲ နေရပါတယ် ဆိုမှ... သူက သရဲအကြောင်းတွေ ပြောနေတယ်...
ဗျို့. ဆက်သွယ်ရေးမြောင်း ရေခွလောင်းခဲ့သူကြီး. အခုရော ဘယ်သူ့ကို ရေလောင်းဖို့ကြံစည်နေတုန်းဗျ. :P
သရဲကြောက်လိုက်နဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းတယ်ဗျို့ ။
သောင်းကျန်သူတွေ မဟုတ်ဘဲ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်...:P
Moscow be daw twar mar le.. book lo chin p :)kg pi yin kg be :)
အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်လို့ပြောချင်လို့ ပါ ****** အောင်ဆန်းသူရိယ အေးချို ကျဆုံးသွားတဲ့ တောင်ကုန်းပါ။ **** .ဗိုလ်မှူး အေးချို က သာယာဝတီနား က ဘိုးသာအောင်ကုန်း တံတား မှာ ရောင်စုံသောင်းကျန်းသူတွေ ကို အင်းစိန် မလာနိုင်အောင်တိုက်ရင်း ကျ သွားတာလို့ဖတ်ဖူးပါတယ်ဗျာ